माओवादी तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमाः बाबुराम | BIVAS
← माओवादी जनमुक्ति सेनामा हेरफेर	खनाल माओवादीमा पसेपछि एमालेमा खैलाबैला →	माओवादी तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमाः बाबुराम	29
माओवादी वरिष्ठ नेता डा. बावुराम भट्टराईले माओवादीले अब सदन र सडकबाट अर्को आन्दोलन गरेर सरकारलाई पछार्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
नवनिर्वाचित सरकारले पूर्णता नपाउदै उनले सदन र सडकबाट तेस्रो जनआन्दोलन गरेर जनसंविधानमार्फत जनताको गणतन्त्र स्थापना गर्ने दावी गर्नुभयो ।
प्रथम गणतन्त्र दिवसको अवसरमा माओवादी वरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले राजधानीमा माओवादीले शुक्रबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अहिले किनबेचको आधारमा गठन भएको सरकारले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने आरोप पनि लगाउनुभयो ।
उहांले सरकारका हरेक निर्णय विदेशीको हातमा पुग्ने बताउदै आफु सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र यो कुरा थाहा भएको खुलाशा गर्नुभयो । नेता भट्टराईले अहिलेको कठपुतलीको सरकारले गणतन्त्रलाई हासिल गर्न पर्दा कसैले पछाडिबाट सरकारलाइ नचाई रहेको आरोप लगाउदै हालको गणतन्त्र कुनै पनि बेला खोसिन सक्ने जिकीर गर्नुभयो । उहांले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्नकै लागी भनेर नारायणहिटीमा स्थापना गर्ने भनेको स्मारक रत्नपार्कमा निर्माण गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो । सो कार्यक्रममा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवलीले सबै वामपन्थी तथा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु मिलेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
← माओवादी जनमुक्ति सेनामा हेरफेर	खनाल माओवादीमा पसेपछि एमालेमा खैलाबैला →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...